နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့ချိန်- မေလ 1 ရက်၊ 2022 ခုနှစ
ကြိုဆိုပါသည်။ vivo သည် သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို အလွန်အလေးထားပြီး သင့်ယုံကြည်မှုကို တန်ဖိုးထားသည်။ သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးဒေတာ ကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူပုံ၊ အသုံးပြုပုံ၊ သိမ်းဆည်းပုံ၊ မျှဝေပုံ၊ လွှဲပြောင်းပုံ သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပုံအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးဒေတာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာများကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် သင့်အခွင့်အရေးများအကြောင်းကို vivo ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။
သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော သီးခြား ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် vivo သည် ဒေတာမစုဆောင်းမီ သီးခြား ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ သင့်တွင် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး ကြည့်ရှုခွင့် သို့မဟုတ် အဆိုပါအချက်အလက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့် ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှုပြီး သင့်တွင် မေးစရာများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
1. စည်းမျဉ်းများနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
ဒေတာထိန်းချုပ်သူဆိုသည်မှာ ကိုယ်ရေးဒေတာများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် နည်းလမ်းများကို တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ အခြားသူများနှင့် ပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်သော သာမန် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။
ကိုယ်ရေး ဒေတာဆိုသည်မှာ မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားဖော်ထုတ်ထားသော သို့မဟုတ် ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သော သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ် ("ဒေတာပိုင်ရှင်") နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ကို တိုက်ရိုက် ခွဲခြားဖော်ထုတ်သော အမည် သို့မဟုတ် အထောက်အထား ID သို့မဟုတ် သင့်ကို သွယ်ဝိုက်ဖော်ထုတ်ထားသော စက်အိုင်ဒီ။ သင် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူ) သည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဒေတာပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
2. ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေ အကြောင်းရင်းများ
vivo သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး အောက်ပါတရားဝင်နယ်ပယ်များအနက် တစ်ခုတွင် ပြုလုပ်သွားပါမည်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အဆိုပါအကြောင်းရင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- (က) သဘောတူညီချက်- သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် သင်က ခွင့်ပြုချက် ပေးထားသည်။
- (ခ) စာချုပ်- သင်ပါဝင်နေသည့် စာချုပ်တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ သင့်တောင်းဆိုချက်အတိုင်း အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။
- (ဂ) ဥပဒေရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ- သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။
- (ဃ) တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ- သင်၏ အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော မျှော်လင့်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။
- (င) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော အခြားအခြေအနေများ။
3. ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူသော ကိုယ်ရေးဒေတာအမျိုးအစား
vivo သည် သင်အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်သော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးဒေတာကိုသာ စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတွင် အောက်ပါအမျိုးအစားများ ပါဝင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၏ ကိုယ်ရေးဒေတာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း အသေးစိတ်ကို ၎င်း၏ဆက်တင်များထဲတွင်လည်း ကြည့်နိုင်သည်။
(က) မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အကောင့် အချက်အလက်များ
vivo ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော vivo တွင် သင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အကောင့် သို့မဟုတ် အခြားအကောင့်များနှင့် အကောင့် ID၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အခြားဆက်စပ်အချက်အလက်များအပါအဝင် ၎င်း၏ဆက်စပ်အသေးစိတ်အချက်များ။
(ခ) အထောက်အထား အချက်အလက်များ
အမည်၊ အသက်နှင့် လိင်အမျိုးအစားကဲ့သို့။
(ဂ) ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ
ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ နေရပ်လိပ်စာများ၊ လူမှုကွန်ရက် အကောင့်များ သို့မဟုတ် အခြားဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပါအဝင်။
(ဃ) စက် အချက်အလက်များ
သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို မိုဘိုင်းစက်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သုံးစွဲပါက စက်နှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များကို သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူနိုင်သည်၊ ဥပမာ- သင့်စက်၏ နိုင်ငံ/ဒေသကုဒ်၊ စက်မော်ဒယ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၊ စက်တည်နေရာ၊ IMEI (နိုင်ငံတကာသုံး မိုဘိုင်းစက်ကိရိယာ အိုင်ဒီ)၊ eMMC ID (ထည့်သွင်းထားသော မာလ်တီမီဒီယာ ကတ်)၊ UFS ID (ဘက်စုံသုံး ဖလက်ရှ် သိုလှောင်ခန်း)၊ SIM နှင့် IMSI (နိုင်ငံတကာ မိုဘိုင်းစာရင်းသွင်းသူ အိုင်ဒီ)၊ GAID (Google ကြော်ငြာ ID)၊ GUID (လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သီးသန့်အိုင်ဒီ)၊ စက်/မော်ဂျူး၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ် သို့မဟုတ် အခြားသီးသန့် အိုင်ဒီများ၊ CPU အချက်အလက်များ၊ မျက်နှာပြင် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုနှင့် သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ကဲ့သို့ ဟာ့ဒ်ဝဲ အချက်အလက်၊ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး ကယ်ရီယာ၊ စိတ်ကြိုက်လုပ်ခြင်း အချက်အလက်များ၊ ဘာသာစကားနှင့် အခြားဆက်တင်များ၊ အပလီကေးရှင်း အချက်အလက်နှင့် သင်အသုံးပြုသော မိုဘိုင်းစက်နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည့် အခြားလိုအပ်သော အချက်အလက်များ။
(င) ကွန်ရက် အချက်အလက်များ
IP လိပ်စာ၊ ကွန်ရက် အမျိုးအစားနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေကဲ့သို့။
(စ) မှတ်တမ်း အချက်အလက်များ
ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသည့် အချိန်နှင့် ကြာချိန်၊ ခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်းများ၊ ထုတ်ကုန်အပေါ် တုံ့ပြန်မှု၊ ရပ်တန့်မှု မှတ်တမ်းများနှင့် ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေမှု ဒေတာကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်၏ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ။
(ဆ) ငွေလွှဲပြောင်းမှု အချက်အလက်များ
ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို မှာယူခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်း/လဲလှယ်ခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ငွေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ။
(ဇ) သင့်ဆန္ဒအလျောက် ပံ့ပိုးပေးသော အခြားအချက်အလက်များ
vivo ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ vivo နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေး ပရိုဖိုင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆန္ဒအလျောက် ပံ့ပိုးပေးသော အချက်အလက်များ၊ ဥပမာ- ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာတွင် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သည့် အကြောင်းအရာ။
4. ကိုယ်ရေး ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
vivo သည် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်-
(က) သင်လိုအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် (i) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ မြှင့်တင်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖန်တီးရန်၊ (ii) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်များ၊ မူဝါဒ အပ်ဒိတ်များ သို့မဟုတ် သင့်အတွက် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆသော အခြားအချက်အလက်များအကြောင်း အသိပေးချက်များ ပေးပို့ရန်၊ (iii) စက် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်း ချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေဖြေရှင်းရန်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပြဿနာများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်၊ ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေရန်နှင့် ပြုပြင်ရန်၊ (iv) စက်များနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲတို့ ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
(ခ) လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတွင်း စစ်ဆေးမှု၊ ဒေတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းမြစ်များနှင့် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်သုံးစွဲမှု ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များနှင့် ထုတ်ကုန်ရောင်းချမှု ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆန်းစစ်ရန်၊ အစီရင်ခံစာများ စုဆောင်းရန် သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပေါင်းထားသော သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည်။
(ဂ) ရောင်းချခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူ ပံ့ပိုးကူညီမှု ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန်
(i) သင်၏ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊ (ii) ထီများ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် အခြားအလားတူပွဲစဉ်များကဲ့သို့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် သို့မဟုတ် (iii) ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်စင်တာ၊ အွန်လိုင်းချတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တို့မှတစ်ဆင့် သင်နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သင်၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို အကြောင်းပြန်ခြင်းကဲ့သို့ သုံးစွဲသူ ပံ့ပိုးကူညီရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။
(ဃ) လုပ်ငန်း လုံခြုံရေးနှင့် အန္တရာယ် ထိန်းချုပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များ လုံခြုံမှုရှိကြောင်း သေချာစေရန် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို တားဆီးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးရှုံးမှု ကာကွယ်ရေးနှင့် လိမ်လည်မှုတားဆီးရေး ပရိုဂရမ်များကို မြှင့်တင်ရန်၊ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအကောင့်အတွက် အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်နှင့် သင့်အကောင့်ကို လုံခြုံအောင်ထားရန်။
(င) တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အချက်အလက်များ
တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါက ဖွင့်ရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အသုံးပြုမှုဒေတာပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ အသုံးပြုမှု အလေ့အကျင့်များနှင့် လိုလားနှစ်သက်မှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ပြီး သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများကို ပြသရန် တဂ်တွဲထားသော အုပ်စု သုံးစွဲသူပရိုဖိုင်များကို ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံကို အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပေးသည်။ သင်၏ အတိအလင်းသဘောတူညီချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆက်သွယ်မှုများကိုလည်း ပို့ပါမည် (အဆိုပါဆက်သွယ်မှုများကို လက်မခံလိုပါက အချိန်မရွေး စာရင်းသွင်းမှု ပယ်ဖျက်နိုင်သည်)။ အဆိုပါ ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရန် သင် ယခင်က အတိအလင်း သဘောတူညီချက်ပေးထားမှသာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အချက်အလက်များကို သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အီလက်ထရောနစ် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးတွင် ထိုကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မှုများမှ စာရင်းသွင်းမှု ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားကြောင်း သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
(ခ) ဥပဒေရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာခြင်း
ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခွန်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် တရားဝင်အစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်နာရန်။
5. ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို သိမ်းထားသည့် အချိန်ကာလ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ သို့မဟုတ် သီးခြား ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအပါအဝင် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာကို စုစည်းရယူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သရွေ့ ၎င်းကို စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ အောက်ပါစံနှုန်းများအပေါ် မူတည်၍ သင့်အကြောင်း ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ထိန်းသိမ်းမည့် ကာလကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်-
- (က) သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးရန် ကိုယ်ရေး ဒေတာကို အသုံးပြုသည့်ကာလ၊
- (ခ) သင်၏ တောင်းဆိုချက် သို့မဟုတ် သင်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ထဲရှိ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊
- (ဂ) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရား။
သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာကို ထိန်းသိမ်းထားရန် မလိုအပ်တော့သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုနိုင်သော တတ်နိုင်သမျှ အတိုဆုံးအချိန်ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင်နှင့်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်များထဲမှ ဖျက်ပါမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခြား ဥပဒေ အကြောင်းရင်းများ ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု သို့မဟုတ် အခြား အစီရင်ခံရန် တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက် လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရှိလျှင် သင်၏ ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဆက်လက် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
6. ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို မျှဝေပုံ
အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် ကိုယ်ရေးဒေတာကို မျှဝေနိုင်ပါသည်-
(က) အပ်နှင်းထားသော စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်
vivo သည် ၎င်းကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ခွင့် အပ်နှံခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏ စီမံဆောင်ရွက်မှုများသည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို လိုက်နာပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စံနှုန်းထက်မလျော့သော စံနှုန်းတစ်ခုဖြင့် သင့်ဒေတာအတွက် ကာကွယ်မှုပေးကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့နှင့် ဒေတာ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များကို ချုပ်ဆိုပါမည်။
(ခ) ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
သင့်အား တိကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးကြောင်း သေချာစေရန် သို့မဟုတ် ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်နှင့် ငွေပေးချေမှုကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ၊ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အွန်လိုင်း ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်းများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများစသည်တို့အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် သင်သတ်မှတ်ထားသည့် အခြားသူများထံ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အချက်အလက်များနှင့် ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သီးခြား ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းများတွင် ဖော်ပြထားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေတာလက်ခံသူများအား သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်နှင့် လိုအပ်ပြီး ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(ဂ) ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဒေသတွင်း တရားရေးရာ သို့မဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ အစိုးရဌာနများမှ တောင်းဆိုလာပါက သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
(ဃ) ထိန်းချုပ်မှု ပြောင်းလဲခြင်း
အမှန်တကယ်ဖြစ်သော သို့မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသော လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းမှု၊ လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် ရောင်းချမှု တစ်ခုခု ဖြစ်လာပါက vivo သည် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် အခွင့်အရေးများကို အလေးထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေနှင့်အညီ သင်၏ ကိုယ်ရေး ဒေတာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင် အခွင့်အရေးများ ရှိပါသည်။ အောက်ပါအပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော သင့်အခွင့်အရေးများကို အသုံးချရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီရေးသို့ သွားရောက်ပြီး သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်တောင်းဆိုမှုကို နှောင့်နှေးမနေဘဲ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။ တောင်းဆိုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံမှ စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို အတည်ပြုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိမ်လည်မှုတားဆီးရေး ပရိုဂရမ်ကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့က သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု၍ မရနိုင်ခြင်း၊ အခြားသူများ၏ အကျိုးစီးပွား သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အားထုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အချိုးကျမျှတမှုမရှိခြင်းတို့ကဲ့သို့ ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ပါ။ သို့သော် မည်သည့် ဖြစ်စဉ်မျိုးတွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သော အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း သင့်တောင်းဆိုချက်ကို အကြောင်းပြန်၍ ရှင်းပြချက်တစ်ခု ပေးပါမည်။ သင့်ဆက်သွယ်မှုများ၏ မှတ်တမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းထားနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး အောက်ပါအခွင့်အရေးများကို အသုံးချနိုင်သည်-
ဤအခွင့်အရေးကိုသုံး၍ အောက်ပါအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုအတွက် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား သင်ကန့်ကွက်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့က အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် သင့်ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ရပ်တန့်လိုက်ပါမည်-
- ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများအတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့်၊
- အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချရန်၊
- သင့်ထံ တိုက်ရိုက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အကြောင်းအရာများ ပေးပို့ရန် သို့မဟုတ်
- သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ မှတ်တမ်းဆိုင်ရာ၊ သုတေသနဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
(ခ) သဘောတူညီမှု ရုပ်သိမ်းခွင့်
လုပ်ဆောင်ချက်အချို့အတွက် (ဥပမာ- ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်) သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် သင့်သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိထားလျှင် သင်သည် ဤသဘောတူညီချက်ကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သော အချိန်ကာလအတွင်း သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည်မှလွဲ၍၊ ထိုသို့လိုအပ်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ အခြေခံအကြောင်းရင်းကို သင့်အား အသိပေးပါမည်။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင့်အကြောင်း အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တောင်းခံနိုင်ပြီး အဆိုပါ အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ပေးရန်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
သင့်အကြောင်းထိန်းသိမ်းထားသည့် အချက်အလက်များကို သင့်အား သုံးခွင့်ပြုရာတွင် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက ငွေကောက်ခံသွားမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှနေ၍ နောက်ထပ်မိတ္တူများ ထပ်မံတောင်းဆိုလာပါက သင့်လျော်သော စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကောက်ခံသွားပါမည်။
အခြေအနေအချို့တွင် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို "ဖျက်ပစ်ပေး" ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တောင်းဆိုခွင့် သင့်တွင် ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဤအခွင့်အရေးကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင် တောင်းဆိုနိုင်သည်-
- သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ရန် မလိုတော့ပါက၊
- သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားသည့် သင့်သဘောတူညီချက်ကို သင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုရန် အခြားတရားဝင် အကြောင်းရင်း မရှိတော့ပါက၊
- ကိုယ်ရေး ဒေတာကို ဥပဒေနှင့်မညီစွာ စီမံဆောင်ရွက်ထားပါက၊
- ဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်အတွက် ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ်
- သင်က စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သင်၏ကန့်ကွက်ချက်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် တရားဝင် အကြောင်းရင်းများကို ပြသနိုင်ခြင်း မရှိပါက။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကန့်သတ်ချက်ရှိသော အခြေအနေများတွင်သာ သင်၏ ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ထိုသို့ငြင်းပယ်ရသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းရင်းကို သင့်အား အမြဲပြောပြပါမည်။ ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဖျက်ပစ်ပေးရန် ခိုင်လုံသော တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို လိုက်နာရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဖျက်ပစ်ရန် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်စွာ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဆင့်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
(င) စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်
အချို့သော အခြေအနေများတွင်၊ ဥပမာ- သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကိုယ်ရေး ဒေတာများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများအတွက် သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ထားပါက သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကန့်သတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများကို မျှဝေထားပြီး ၎င်းက မဖြစ်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် အချိုးအစားမမျှတသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပါဝင်ပါက ကန့်သတ်ထားသော စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအကြောင်း ၎င်းတို့ကို အကြောင်းကြားပါမည်။ ထို့နည်းတူ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မဆိုအား မဖယ်ရှားမီ သင့်ကိုလည်း အကြောင်းကြားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည့် မမှန်ကန်သော သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှုမရှိသော ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ ဤကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေထားပါက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မဖြစ်နိုင်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု သို့မဟုတ် လွန်ကဲသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျိုး မဟုတ်လျှင် ပြင်ဆင်မှုအကြောင်းကို ၎င်းတို့ထံ အကြောင်းကြားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့က မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှုမရှိသော ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်း အသေးစိတ်ကိုလည်း သင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်နာရန် သင့်လျော်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည့်နေရာတွင် ဤဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားပါမည်။
1) ကိုယ်ရေးဒေတာကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 2) ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဒေတာပိုင်ရှင်များက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်ထားခြင်းနှင့် 3) သင့်သဘောတူညီချက်ပေါ်အခြေခံ၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် စာချုပ် သို့မဟုတ် စာချုပ်တွင် အကြိုပြုလုပ်သော အဆင့်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်မှသာလျှင် သင့်တွင် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို အဆင်ပြေသောပုံစံဖြင့် လက်ခံရရှိရန် တောင်းဆိုခွင့် သို့မဟုတ် အဆိုပါဒေတာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအကြား လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့် အခြားပြင်ပကုမ္ပဏီထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင့်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်များကို သင်ကလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးများသော စက်များဖတ်ရှုနိုင်သည့် ပုံစံဖြင့် ပေးအပ်မည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို သင်က လွှဲပြောင်းနိုင်ပါမည်။
သင်၏အခွင့်အရေးများကို အသုံးချခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့် အချို့သော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းများအတွက် သင့်သဘောတူညီချက်ပေးခြင်းနှင့် သင်၏ သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသော ဒေတာများကို ဖျက်ပေးရန် သင်၏တောင်းဆိုချက်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူ၍ ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
သင်၏ အွန်လိုင်း သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်နှင့် သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့က ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူနည်းပညာများကို အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြား ကွတ်ကီး မူဝါဒတွင် ကိုးကားဖတ်ရှုပေးပါ။
9. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ စုစည်းရယူသော အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများက ထိန်းချုပ်သဖြင့် အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးမပြုမီ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို လေ့လာရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ ဖြစ်လာမည့် အန္တရာယ်များကို သင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ၍ အဆိုပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရပါမည်။
အချို့သော vivo ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ သင်မျှဝေသည့် ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို အခြားသုံးစွဲသူများက မြင်ကောင်းမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်များနှင့် အများပြည်သူက မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းဒေတာများကို အဆိုပါ အခြားအဖွဲ့အစည်းများက ဖတ်ရှုနိုင်၊ စုစည်းရယူနိုင်၊ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ သင်မျှဝေရန် သို့မဟုတ် ပေးပို့ရန် ရွေးချယ်သော ကိုယ်ရေးဒေတာများအတွက် သင့်တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။
vivo သည် သင်၏ ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ဆုံးရှုံးမှု၊ တလွဲအသုံးပြုမှုနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဝင်ရောက် သုံးစွဲမှု၊ ပြောင်းလဲမှု၊ ထုတ်ဖော်မှု သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးမှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ နည်းပညာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများ ကန့်သတ်ချက်မရှိ အပါအဝင် သင့်လျော်သော လုံခြုံရေးအစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ထားသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဲ့သို့သော တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ထားသော်လည်း သင့်အချက်အလက်များကို အပြည့်အဝ ဘေးကင်းလုံခြုံစေပြီး ကာကွယ်ပေးရန် အာမခံနိုင်သည့် လုံခြုံရေးစနစ်မရှိပါ။
အောက်ပါတို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သည့် ဒေတာလုံခြုံရေး တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု ဥပမာများဖြစ်သည်-
- (က) ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်စနစ်များတွင် စီမံဆောင်ရွက်ထားသော ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်အတွက် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ခြင်း၊ အချက်အလက်စနစ်များ တည်ရှိသော အဆောက်အအုံများသို့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဝင်ရောက်မှုမှန်သမျှကို တားဆီးခြင်း။
- (ခ) အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု- စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ လုံခြုံရေးအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးဒေတာ လုံခြုံမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ထားသော အစီအမံများ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။
- (ဂ) အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ဝှက်ထားခြင်း- အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ကုဒ်ပြောင်းဝှက်နည်းပညာများနှင့် မည်သူမည်ဝါ မဖော်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားသည့် နည်းပညာများအပါအဝင် ကန့်သတ်မထားသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
- (ဃ) စီမံဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ- ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်စနစ်များတွင် ပါဝင်သော ကိုယ်ရေးဒေတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
- (င) ပုံမှန်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း- ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲသည့် ဖြစ်ရပ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ယင်းကဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက် သုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် သင့်လျော်သော အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ကိုယ်ရေး ဒေတာများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေး ဒေတာဆိုင်ရာ အချက်အလက် စနစ်များ၏ ကာကွယ်မှုအဆင့်တို့ သေချာစေရန် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ထားသည်။
- (စ) မူလအတိုင်း ပြန်လည်ထားရှိခြင်း- ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲကာ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်လိုက်သည့် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးလိုက်သည့် ကိုယ်ရေးဒေတာများကို မူလအတိုင်း ပြန်လည်ထားရှိရန် လက်တွေ့ကျသော အစီအမံအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
11. အသက်မပြည့်သေးသူ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း vivo ၏ ဝန်ဆောင်မှုမှန်သမျှသည် အသက်မပြည့်သေးသူများ သုံးရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် အသက်မပြည့်သေးသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် စုဆောင်းခြင်း မပြုပါ။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင်သာ အသက်မပြည့်သေးသူများ၏ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါမည် သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပါမည်
- (က) အသက်မပြည့်သေးသူ၏ မိဘ သို့မဟုတ် အခြားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်က သဘောတူညီချက် ပေးထားလျှင် သို့မဟုတ်
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေများအရ အခြားတရားဝင်အကြောင်းရင်းများရှိလျှင်။
ကလေး၏ မိဘများထံမှ အတည်ပြုထားသော ကြိုတင်သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ အသက်မပြည့်သေးသူ၏ ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ မတော်တဆ စုဆောင်းမိပါက ၎င်းဒေတာကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖျက်ပစ်ရန် ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။ အသက်မပြည့်သေးသူတစ်ဦးသည် မိဘ/တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပံ့ပိုးပေးထားသည်ဟု သင် ယူဆပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
12. သိုလှောင်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာသို့ လွှဲပြောင်းမှု
သုံးစွဲသူ၏ နိုင်ငံ/ဒေသရှိ ဒေတာ ကာကွယ်ရေးအဆင့်အတိုင်း ပေးအပ်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာသိမ်းဆည်းသော တည်နေရာသည် နိုင်ငံ/ဒေသအမျိုးမျိုးမှ သုံးစွဲသူများအတွက် ကွဲပြားသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဥရောပစီးပွားရေး ဒေသ၊ အန်ဒိုရာ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ မက်ဆီဒိုနီးယား၊ မိုနာကို၊ မွန်တီနီဂရိုး၊ ဆားဘီးယား၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ကိုလံဘီယာ၊ တူရကီ၊ ဩစတြေးလျ၊ ပီရူးနှင့် အစ္စရေးတို့တွင် အသုံးပြုပါက သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဂျာမနီတွင် တည်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာတွင် သိမ်းဆည်းပါမည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရုရှား သို့မဟုတ် အိန္ဒိယတွင် အသုံးပြုပါက သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို သင့်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာတွင် သိမ်းဆည်းပါမည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အခြားနိုင်ငံများ/ဒေသများတွင် အသုံးပြုပါက သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို စင်္ကာပူတွင် တည်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာတွင် သိမ်းဆည်းပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို လုံခြုံသည့် နည်းလမ်းဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး လွှဲပြောင်းထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့က သေချာအောင် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို သင့်နိုင်ငံ/ဒေသ ပြင်ပတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လွှဲပြောင်းလျှင် သင့်ဒေတာကို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ လုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာစေရန် သင့်လျော်သော အဆင့်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဥပမာ၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ-
- ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းက သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ကာကွယ်ပေးကြောင်း သေချာစေရန် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဒေတာ လွှဲပြောင်းမှု သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် စံစာချုပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအပိုဒ်ငယ်များကို စာချုပ်ထဲတွင် ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် သို့မဟုတ်
- ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်အကြား သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းအကြား စာချုပ်ကို အပြီးသတ်ချုပ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် စာချုပ်ပါ အချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး လွှဲပြောင်းမှုသည် ထိုစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များအရ သင့်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်လျှင် (ဥပမာ၊ သင့်နိုင်ငံ ပြင်ပရှိ အကျိုးခံစားခွင့် ပံ့ပိုးပေးသူထံ သင့်ဒေတာများကို လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်လာသည့်အခါ) သို့မဟုတ်
- ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုကို သင်ခွင့်ပြုထားလျှင်။
သင်သည် အဆိုပါ သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် စံစာချုပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအပိုဒ်ငယ်များ၏ မိတ္တူကို တောင်းဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
13. အပ်ဒိတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းကြားချက်များ
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲမှု ရှိပါက အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အခြား ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် သင့်ကို အကြောင်းကြားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
14. ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒထဲတွင် ဖြေကြားပေးထားခြင်းမရှိသည့် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်တွယ်စီမံပုံအကြောင်း မေးမြန်းစရာတစ်ခုခုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိကိုဖြစ်စေ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်- https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support။ အောက်ပါကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
(က) ဒေတာထိန်းချုပ်သူ- vivo Mobile Communication Co., Ltd., မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လိပ်စာ No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ privacy@vivo.com။
(ခ) ဒေတာ ကာကွယ်ရေးအရာရှိ- dpo@vivo.com
(ဂ) ဥရောပစီးပွားရေး နယ်မြေရှိ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်- vivo Tech GmbH၊ Speditionstraße 21၊ 40221 Düsseldorf၊ Germany လိပ်စာဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည်